Maninona no mifidy anay - ALife Solar Technology Co., Ltd.
1. ALife Solar dia manome takelaka masoandro, mpanodina, rafi-masoandro, rafitra jiro amin'ny masoandro, rafitra paompin-drano amin'ny masoandro, sns. Afaka manome vahaolana tokana ho an'ny mpanjifantsika.
2. Ny vokatra dia misy fanamarinana toy ny ISO9001, TUV, JET, CQCand CE
3. Miaraka amin'ny antoka fiantohana 12 taona (garantie fampisehoana maharitra 25 na 30 taona) ho an'ny tontolon'ny masoandro sy fiantohana mpamokatra 5 taona ho an'ny inverters masoandro, izay be mpampiasa any amin'ny firenena sy faritra 60 mahery.
4. Manana mari-pahaizana fifanarahana amin'ny fametrahana fitaovana mekanika sy elektrika izahay. Vonona hanao tetik'asa Engineering, Procurement and Construction (EPC) ho an'ny rafitra famokarana herinaratra photovoltaic, manome amin'ny:
1). Fakan-kevitra momba ny tetikasa
2). Fanadihadiana amin'ny tranokala
3). Famolavolana rafitra
4). Fampivoarana ny tetika
5). Famokarana sy fitaterana
6). Fananganana sy fametrahana
7). Fitantanana fifandraisana Grid
8). Serivisy fikojakojana sy fikojakojana ny tobin-jiro
Miaraka amin'ny fahaizan'ny tetikasa 800+ MW mahery, ny ALife Solar dia manome rafitra famokarana herinaratra-voltaika mahomby sy azo antoka ary maharitra miaraka amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa manerantany ary vonona hiara-miasa aminao hanazava ny fiainana amin'ny hazavan'ny masoandro ary hamorona ho avy maitso, salama ary tsara kokoa!